Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment के तपाईको श्रीमती स-सानो कुरामा झगडा गर्छिन ? हरेक पतिले यसो गर्नुहोस चुप हुन्छे पत्नी - Pnpkhabar.com
के तपाईको श्रीमती स-सानो कुरामा झगडा गर्छिन ? हरेक पतिले यसो गर्नुहोस चुप हुन्छे पत्नी
पिएनपिखबर : युनानका यी एक बाबा एकदम प्रसिद्ध छन । उनको नाम सुकरात हो। दुनिया भर उनि लोकप्रिय छन्। दार्शनिक सुकरात आफ्नो लोकप्रियतामा उनलाई अहंकार थिएन। उनि सहज, शान्त, सहनशील र बिनम्र स्वभावका थिए। शान्त स्वभावका सुकरातको पत्नी भने एकदम रिसालु खालकी थिइन्। उनि स-सानो कुरामा झगडा गर्ने गर्थे। तर पनि सुकरात शान्त नै बस्थे। सुकरात आफ्नो पत्नीको गालिको कुनै जवाफ दिदैन थियो।
एक दिन सुकरात आफ्नो शिष्यहरुको अगाडी बसेका थिए। कुनै महत्वपूर्ण विषयका बारेमा दार्शनिक चर्चा भैरहेको थियो। सुकरात आफ्नो कुरा शिष्यहरुलाई सुनाई रहेका थिए साथै शिष्यहरुको तर्क पनि सुनिरहेका थिए।
त्यहि बेला घर भित्रबाट पत्नीले केहि कामको लागि सुकरातलाई बोलाउने गर्छन। तर सुकरात शिष्यहरुको कुरा सुनिरहेका थिए। सोहि कारण उनले पत्नीले बोलाएको सुन्दैन। पत्नीले धेरै पटक बोलाउदा पनि शिष्यसंग व्यस्त रहेका कारण उनले पत्नीको आवाजलाई ध्यान नै दिदैनन।
पत्नीलाई यति रिस उठिसकेको थियो कि उनले शिष्यको कुरा सुनिरहेका सुकरातलाई एक बाल्टी पानी ल्याएर खनाईदिन्छ। यो देखेर शिष्यहरुलाई नराम्रो लाग्छ तर पनि सुकरातले शिष्यहरुको अगाडी भन्छन ‘मेरी पत्नी कति बुझ्ने छिन मलाई गर्मि भयो भनेर पानी खनाएर मलाई शितलता दिईन।’
आफ्नो गुरुको सहनशीलता देखेर शिष्यहरुले प्रणाम गरे र पत्नीको क्रोध पनि शान्त भयो।
पत्नीको रिसको जवाफ सज्जन तरिकाले दिंदा क्रोध शान्त हुन्छ र ठुलो विवादको स्थिति पैदा हुदैन। घरमा शान्ति कायम राख्न यसो गर्नु जरुरि हुन्छ।
प्राय श्रीमान श्रीमतीको क्रोधले विवाद मात्र पैदा गराउछ। क्रोधले सधै बिगार्छ मात्रै। रिसाएको बेला सहि गलत छुट्याउन सकिदैन। रिसको अबेगमा जे पनि बोल्न सक्छन। त्यसैले बैबाहिक जीवनलाई शान्त बनाउनको लागि जीवनसाथीको क्रोधको जवाफ शान्तिले दिनु पर्छ।